Madaxda Jubbaland ayaa lagu eedeeyey dadka gobolka Gedo inay u adeegsadeen shisheeye… – Hagaag.com
Madaxda Jubbaland ayaa lagu eedeeyey dadka gobolka Gedo inay u adeegsadeen shisheeye…
Cabdiraxmaan Maxamed Xuseen, Wasiir Kuxigeenkii Arrimaha Gudaha ee Dowlad Goboleedka Jubbaland, iminkana ka mid ah Masuuliyiinta Maamulka Gobolka Gedo ee taabacsan Dowladda Federaalka ayaa sheegay in Doorashada Xildhibaanada Golaha Shacabka ka dhici doonto Magaalada Garbahaarey ee Xarunta Gobolka Gedo.
Waxaa uu sheegay in doorashadaasi ay maamuli doonaan Guddiyada Doorashooyinka ee Dowladda Federaalka u ogolaato in ay maamulaan doorashooyinka.
Madaxweynaha Jubbaland, Axmed Maxamed Islaam (Axmed Madoobe) oo Sabtidii dib ugu laabtay Magaalada Kismaayo ayaa sheegay inaanay Doorashada Golaha Shacabka ka dhici karin Magaalada Garbahaarey, inta maamulkii ay magacaabeen uu fadhiyo Magaalada Kismaayo.
Axmed Madoobe ayaa xilligaa sheegay in lagu heshiiyay in Dowlad Goboleed kasta loo asteeyay laba deegaan doorasho, Jubbaland-na la isku waafaqay in deegaan doorashadeeda noqoto Kismaayo iyo Garbahaarey, balse aan Garbahaarey lagu qaban karin, illaa iyo inta ay ka maqan tahay gacanta Jubbaland.
Cabdiraxmaan Maxamed Xuseen oo la hadlay BBC ayaa sheegay in doorashada aanay ahayn mid ka go’do oo keliya Madaxweynaha Jubbaland iyo Madaxweyne Kuxigeenka, balse ay tahay mid ay ku heshiisay Soomaali oo dhan.
Sidoo kale waxa uu sheegay in Maamulkii Jubbaland ee Gobolka Gedo ay ku fashilmeen waajibaadkii loo igmaday, isla-markaana ay ka gaabiyeen in si cadaaladi ku dheehan tahay ugu adeeggaan dadka ku dhaqan gobolkaasi.
Waxa kaloo uu sheegay in Hoggaanka Jubbaland uu ku hungoobay inuu kasbado kalsoonida dadka deegaanka, isagoona su’aal geliyay nooca ay tahay wareejinta ay xilligan dalbanayaan. Waxa uu intaa ku daray in dadka reer Gedo ay Madaxda Jubbaland u arkaan kuwo hal magaalo oo qura haysta, isla-markaana aanay cidina metelin. Madaxda Jubbaland ayuu ku eedeeyay in dadka gobolka ay u adeegsadeen shisheeye, si ay u dhibaateeyaan, sida uu yiri.
Cabdiraxmaan Maxamed ayaa muujiyay in doorashada lagu qaban doono Magaalada Garbahaarey, iyadoo aan lagu wareejin Jubbaland.